अहिलेको समयमा प्रत्येक अफिसमा इन्टरनेट प्रयोग त स्वाभाविक नै छ। जुनसुकै कामको लागी पनि इन्टरनेट अति आबश्यक भैसकेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि कार्यालय प्रयोजनको लागी बिसेस प्याकेज अन्तर्गत सेवा दिदैआइरहेको छ। ब्रोडलिङ्क कम्पनीले पनि कार्यालय प्रयोजनको लागी भनेर आकर्षण प्याकेज बनाएर इन्टरनेट प्रदान गर्दै आइरहेको छ। बिजनेस प्याकेजको सुबिधा चाहि इन्टरनेट बिसेस कारणबस अबरुद्द हुदा पनि कार्यालय प्रयोजनको लागी कम्पनि अलि चनाखो हुन्छा। ब्रोड्लिङ्कको ब्यबसायिक प्याकेज अन्तर्गतको सेवामा इन्टरनेट उपलब्धतामा हर हमेसा १०० प्रतिशत नै हुने गर्दछ।
ब्रोड्लिङ्कको कार्यालय प्रयोजनको लागी इन्टरनेटको प्याकेज निमानुसार रहेको छ।
25 Mbps प्याकेज
ब्रोडलिङ्कको यस प्याकेज अन्तर्गत 25 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। करिब १० जना सम्मको प्रयोगकर्ताहरुको लागी अति उपयुक्त हुने यस प्याकेजमा ग्राहकले १ महिने, ३ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. २, ३०० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १३, ११० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. २४, ०१२ /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
35 Mbps प्याकेज
ब्रोडलिङ्कको यस प्याकेज अन्तर्गत 35 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। करिब १५ जना सम्मको प्रयोगकर्ताहरुको लागी अति उपयुक्त हुने यस प्याकेजमा ग्राहकले १ महिने, ३ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. २, ७०० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १५, ३९० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. २८, १८८ /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
45 Mbps प्याकेज
ब्रोडलिङ्कको यस प्याकेज अन्तर्गत 45 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। करिब २० जना सम्मको प्रयोगकर्ताहरुको लागी अति उपयुक्त हुने यस प्याकेजमा ग्राहकले १ महिने, ३ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ३, २०० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १८, २४० /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ३३, ४०८ /-, ONU रेण्टल शुल्क रु. २, ५०० /-, फाइबर तार शुल्क रु. ५०० /- र ONU सुरक्षा डिपोजिट शुल्क रु. ५०० /- पर्छ।
निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि ब्रोडलिङ्कले सन् २०१० देखि घरायसी प्रयोजनको लागी तारबिना इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै...
वर्ल्डलिङ्क ब्रोडलिङ्क एनसेल डीसहोम भायनेट क्लासिक टेक वेबसर्फर सुबिसु नेपाल टेलिकम